प्रनिश थापा, चितवन, २७ पुस । अपराधिक गतिविधी नियन्त्रणमा लिन चितवन प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा परिचालन गरेका घुमुवा प्रहरीहरु अशुली कार्यमै मस्त छन् ।
जिल्लामा हुने अबैध चोरी पैठारी, लागुऔषध, देहब्यापारलगायत गतिविधिलाई निस्तेज पारी नमूना योग्य चितवन बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको ‘थ्री एस अप्रेसन’ का टोलीले समेत अनुचित लाभ लिदै आइरहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार क्राइमको नामाकरण गरी उक्त अप्रेसनमा खटाइएका भनिएका पहिल्यै देखि नै बिवादास्पद छवी भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी जवान इस्यु मियाँ धोबीलाई परिचालन गरी अशुली कार्यलाई ब्यापकता दिएको बताइएको छ ।
हाकिमको अगाडि सोझो भनी इमान्दारी देखाइ मन जित्ने प्रहरी जवान धोबीले पुनः घुमुवाको जिम्मेवारी पाएपछि विभिन्न गैर ब्याबसायीकहरुसित गैरकानुनी रूपमा ब्यापार गर्न दिने सर्तमा रकम उठाउने गरेको बुझिएको छ । यसअघि एसपी समेतलाई गुम्राहमा राखी अनुचित लाभ लिएको भन्ने ब्यापक गुनासो आउन थालेपछि एसपी साबले घुमुवाबाट हटाइ ड्युटीमा परिचालन गर्नुभएको थियो ।
ती हवल्दार दर्जाका प्रहरी भन्छन् : घुमुवामा हटाइ ड्युटीमा परिचालन गरेका उनलाई दुई महिनाभित्रै पुनः सादा पोशाकमा किन खटाइयो भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ । अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा लिनै थियो भने उहाँले अर्को प्रहरी पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि ?
आफैंले हटाइएको प्रहरीलाई पुनः घुमुवाको जिम्मेवारी के र कति कारणले दियो ? उनले थपे, एसपी साब उनको अशुली धन्दाबारे कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? त्यो थाहा छैनन् ।
तर, उहाँको सोझोपनाको फाइदा उठाउदै घोबीले चितवन नारायणगढस्थित कमलनगरमा रहेको लम्बुको मासु पसलबाट १७ हजार, भान्जाको मासु पसलबाट १० हजार र मालपोत नजिक शाह थर भएको बाख्रा काट्ने पसलबाट ५ हजार रुपैयाँ महिनावारी उठाउने गरेको र कसैले सोधेको खण्डमा लिदैन भनी भन्न समेत लगाउने गरेको पाइएको छ ।
उक्त पसलका सञ्चालकलाई यसअघि तत्कालिन चितवनका प्रहरी प्रमुख दीपक थापाले गैर ब्याबसायीक रूपमा ब्याबसायी सञ्चालन गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइ एक सातासम्म प्रहरी हिरासतमा राखी छाडिएको थियो भने उल्लेखित पसलहरुबाट यस अघिका घुमुवाहरुले २० हजार रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको ती प्रहरीहरु बताउँछन् ।
जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट बिवादास्पद पृष्ठभुमी भएका दुई असइ सहित तीन हवल्दार तीन प्रहरी जवानलाई जिल्ला तानेर थन्क्याए, शान्ति सुरक्षामा कटिबद्ध भइ अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा लिन समेत कुनै कन्जुस्याइँ बाँकी नराखी चितवनबासीको लोकप्रिय बन्न सफल भएका चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी सुशीलसिंह राठौर पछिल्लो समय खुँम्चिदै गएका छन् ।
लामो समयदेखि दरबन्दी अन्यत्र भएकाहरूलार्इ मुद्दा फाँट जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएपछि उनी बिवादमा आएका हुन् । मुद्दा फाँटमा कार्यारर्त सइ शैलेन्द्र खड्का जो जागिरको अधिकांश समय चितवनमा नै बिताएका छन् ।
उनीसहित असइ पुर्ण बहादुर खड्का, हवल्दार बिष्णु मल्ल र प्रहरी जवान बिष्णु पौडेल समेतलाई अझैसम्म चलाइएको छैनन् । मल्ल र पौडेल समेत लामो समयदेखि जिल्लामै कार्यरत छन् । हवल्दार मल्ल सिपाहीबाट बढुवा भए पनि बढुवापछिको पदस्थापना भएको क्षेत्रमा भने अझै रवाना लिएका छैनन् ।
भने काजमा गराउदै थमौती पाउदै गएका छन् । स्रोतअनुसार उनीहरुको काज रहेको बुझिएको छ । यद्यपि, बर्षौं बर्ष देखि काज गराउदै थमौती पाउदै जाने हो भने, सरुवा निकाल्नुको के अर्थ ? उनलाई चितवनका प्रहरी प्रमुखको आशिर्वाद रहेको समेत बुझिन आएको छ ।
उनले जिल्लाका अधिकांश प्रहरीलाई परिवर्तन मात्रै गरेका छैनन् कि लामो समयदेखि जिल्लामा एकछत्र राज गर्दै आएका समेतलाई बिनारोकावट दरबन्दीमा फिर्ता पठाए । आफ्नै चालक र भान्से समेतलाई दरबन्दीमा ठेगान लगाइ छाडे, सुरक्षामा कुनै कन्जुस्याइँ बाँकी राखेनन् ।
तर, जागिरको अवधिभर बिवादमा तानिरहेका प्रहरीलाई भने उनले किन काखी च्याप्र भन्नेमा समेत शंका पैदा भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । सबै चितवनबासीको लोकप्रिय बन्न सफल एसपी राठौर मुद्दा फाँटकै कारण बिवादमा पर्ने निश्चत प्रायः छ ।
यसै बिषयमा बुझ्न बुधबार साँझ चितवनका प्रहरी प्रमुख सुशील सिंह राठौरलाइ टेलिफोन गर्दा उनले फोन काटिदिएका थिए भने, म्यासेजको समेत रिप्लाई भएको थिएन । त्यस्तै, ईलाका प्रहरी कार्यालय भण्डारा प्रहरी हवल्दार उमेश महत्तोको समेत अशुली धन्दा दुई गुणाले वृद्धि हुँदै गएको स्रोतले बताएको छ ।
तत्कालिन समयमा गोन्द्राङ्ग प्रहरी चौकीमा कार्यारर्त रहेका उनलाई यात्रुसित झैंझगडा गरेको भन्दै चितवनका तत्कालिन एसपी दीपक थापाले कृष्णपुर प्रहरी बिटमा चौकीमा पठाएको थियो ।
त्यहाँ ४ महिनासम्म कार्यारर्त रहेका उनलाई तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक जयनारायण यादवले पछि लोथर प्रहरी चौकीमा खटाइएकोमा अहिले ईलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराका आएका छन्
। उनलाई सादा पोशाकको जिम्मेवारी नदिएको बताइए पनि प्रहरी स्रोतले भने, उनी घुमुवाको कमान्डर रहेको खुल्नमा आएको छ । उनको कमान्डमा प्रहरी जवान मुकेश यादव रहेको समेत स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार उनी पछिल्लो समय निक्कै बिवादतमा गुज्रिरहेको रहेको खुल्नमा आएको छ ।
तीब्र बिवादमा रहेको हवल्दार महत्तोले विभिन्न ब्यापारीहरुसंँग मनलाग्दी रूपमा रकम उठाउने गरेको भएपनि उनलाई चितवन प्रहरीले नै संरक्षण गरिरहेको आरोप समेत उनले लगाए । उनले कपडा, मुर्ती र सुर्तीजन्य पर्दार्थ ओसारपसार गर्ने काठमाडौंंबाट दिल्ली चल्ने भारतीय पर्यटक बस ड्वलु.ड्वलु. बि. आरसहित विभिन्न ट्रान्सपोर्टहरुबाट रकम उठाउने गरेको पाइएको छ ।
वीरगंजबाट नारायणगढ चल्ने साझा ट्रान्सपोर्ट, महाशक्ति ट्रान्सपोर्ट र पशुपति ट्रान्सपोर्टबाट रकम उठाइ लाइन खुलाउने र सो, धन्दामा घुमुवा प्रहरी जवान मुकेशले पनि साथ दिने गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
यस बिषयमा भण्डाराका प्रहरी निरीक्षक बसन्त आचार्य संँग प्रतिक्रिया लिदा उनले आफ्नु कमान्डमा आएपछि बदमासी नगरेको र बदमासी गरेको पाइए तत्कालै कार्वाही गर्ने बताए । यस बिषयमा के कसो भएको हो ? निज हवल्दार महत्तोमाथि म निगरानी बढाउने छु । उनले भने, आरोप पुष्टि भएमा बिभागीय कार्वाही हुन्छ ।
उनले थपे, संँगठनमा बदमासी गर्ने छुट कसैलाई छैनन् । त्यस्तै, वर्डा प्रहरी कार्यालय नारायणगढका प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद गौतम अशुलीमा मस्त छन् । त्यहाँ कार्यरत दरबन्दीवाला प्रहरी निरीक्षकलाई बालाजु वृत्तमा पुर्‍याइ गौतम चितवन काजमा आएका हुन् ।
लेखा अधिकृतको नियुक्ति हुँदादेखि नै सधैँ विवादमा तानिँदै आएका गौतमले जागीरको दौरानमा नारायणगढ वडा प्रहरीको प्रमुख ताक्नुको अर्थ प्रष्ट हुन्छ । उनको जागिर अब करिब डेढ वर्षमात्रै बाँकी छ । यो बीचमा उनी बिवादमा तानिने लगभग पक्का पक्की जस्तै भएको छ ।
यीनै गौतमले अहिले घुमुवामा प्रहरी हवल्दार हिम बहादुर बिंडारी, जवान राजेन्द्र बयलकोटी, सवारी चालक प्रहरी जवान उपेन्द्र पट्टेल समेतलाई घुमुवाका रूपमा पैसा उठाउन परिचालन गरेका थिए । घुमुवाका रूपमा परिचालित पट्टेल, बिंडारी र बयलकोटीले निरीक्षक गौतमका नाममा त उठाउने नै भए आफ्नो लागी पनि नउठाउने कुरै भएनन् ।
पछिल्लोसमय नारायणगढ एरियामा रहेको केही निश्चित होटल, लज र गेष्टहाउसहरुमा संगठित रूपमा वेश्यावृत्ती मौलाइ रहेको गुनासो बाहिरिए पनि वर्डा प्रहरीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । कारण उनले वर्डा प्रहरीमा आएर राम्रो सँग नेतृत्व गर्न नसक्नु हो ।
स्वच्छ छवि भएका एसपी सुशीलसिंह राठौर र डिएसपी दुर्गाराज रेग्मी समेतलाई अँध्यारोमा राख्दै केही होटल, लज र गेष्ट हाउस सञ्चालकले प्रहरी सेटिङमा यस्तो धन्दा चलाइरहेको छ । तर, वर्डाका प्रहरी निरीक्षक गौतम आएपछि भने टिडी जेसिक र लागुऔषध समेत फस्टाइरहेको छ ।
उनी चितवन बासी त छँदै थिए । सोर्सफोर्समा उनले प्रहरी मुख्यालयको मानवस्रोत विभागमा २ वर्ष र अपराध अनुसन्धान विभागमा १ वर्ष गरी ३ वर्ष लेखा अधिकृत हुने मौका समेत पाए । अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालका समयमा बदनाम लेखा अधिकृतहरू हटाउने अभियानन्तर्गत गौतम पनि अधिकृतबाट हटेका थिए ।
पछिल्लो पटक सरुवाका क्रममा उनी महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा पोष्टिङ भए । तर, डिएसपी बस्ने ठाउँमा सेकेण्ड म्यान भएर के फाइदा, अतिरिक्त आम्दानी हुने अवस्था नदेखिए पछि गौतमले पुनः सोर्सफोर्स लगाउन पुगे र हाकिम भए वडा प्रहरी कार्यालय, नारायणगढको ।